काठमाडौं २ छोडेर रौतहट रोजेका माधव नेपाल फेरि किन फर्किए काठमाडौं ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं २ छोडेर रौतहट रोजेका माधव नेपाल फेरि किन फर्किए काठमाडौं ?
प्रकाशित मिति: २५ कार्तिक २०७४, शनिबार November 12, 2017
काठमाडौं । उम्मोदवारका लागि रौतहट र काठमाडौंका तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस भएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल काठमाडौं २ वाट चुनाव लड्दैछन् । काठमाडौं २ बाट सर्वसम्मत सिफारिस भइसकेका नेपाललाई रौतहटका दुई क्षेत्रबाट सिफारिस गरिएको थियो । तर नेपालले काठमाडौं नै रोजे । नेपाललाई रौतहट १ र ४ बाट सिफारिस गरिएको थियो ।संवैधानिक बाध्यता अनुसार नेपालले एउटामात्र क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाल काठमाडौं २ र रौतहट १ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनले पछि काठमाडौं २ छाडेर रौतहट १ कायम गरेका थिए । स्थानीय चुनावमा गृहनगर गौरसहित रौतहटका सबै स्थानीय चुनावमा एमालेले हाले हारेपछि नेता नेपाल काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने तयारीमा पुगेका थिए ।
निरन्तर रुपमा बाम दलले विजय हासिल गरेको काठमाडौं क्षेत्र नं. २ मा २०७० सालको उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक बिजय हासिल गरेको थियो । रौतहटबाट समेत बिजयी भएपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले काठमाडौं २ छोडेका थिए, जहाँ पछि उपनिर्वाचन भएको थियो । उपनिर्वाचनमा एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै कांग्रेसका दीपक कुँइकेल निर्वाचित भएका थिए ।
रौतहटमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले नराम्रो पराजय हासिल गरेपछि आफू सुरक्षित हुन नेपालले फेरी काठमाडौं क्षेत्र नं। २ लाई रोजेर प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् । नेपालसँग प्रर्तिष्पर्धाका लागि कांग्रेसले २०७० को उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेका कांग्रेसका स्थानीय नेता दीपक कुँइकेललाई मैदानमा उतारेको छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं २ मा कांग्रेसले १४ हजार ५ सय १८, एमालेले १९ हजार १ सय ९६, माओवादीले ५ हजार ७ सय ३२ र राप्रपाले ५ हजार २७ मत पाएको थियो । यस आधारमा यहाँ बाम गठबन्धनको पक्षमा २४ हजार ९ सय २८ र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा १९ हजार ५ सय ४५ मत रहेको छ । अर्थात बाम गठबन्धन ५ हजार ३ सय ८३ मतले अगाडि रहेको छ ।
नेपाल यसअगाडि निर्वाचित भएपनि उनीमाथि मतदाताका गुनासा धेरै छन् । कांग्रेसका कुँइकेल स्थानीय नेता भएको लाभ उनलाई उन सक्छ । उनले कांग्रेसका अन्य उम्मेदवार भन्दा राम्रो मत पाउने आँकलन गर्न सकिन्छ । यसअर्थमा क्षेत्र नं। २ मा बाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबिच कडा प्रर्तिष्पर्धा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हारकाे ह्याट्रिक हुने डरमा राणा,जित जाेगाउने कसरतमा तामाङ
सिन्धुपाल्चोक । पञ्चायतकालीन राजनीतिदेखि नै सिन्धुपाल्चोकमा आफ्नो पकड जमाउँदै आएका राप्रपा […]
अबको निर्वाचन पैसाको भरमा जित्छु भन्नु दिवा सपना मात्र : अध्यक्ष प्रचण्ड
चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वाम गठबन्धन स्थिर सरकार र समृद्धिका लागि बनेको बताएका […]
अोली र प्रचण्ड कोट झुन्डाउने कम्युनिष्ट : भट्टरार्इ
गोरखा । नयाँ शक्तिका नेता तथा गोरखा २ बाट प्रतिनीधिसभाका उम्मेदवार डा.बाबुराम भट्टराईले एमाले र माओवादी […]
‘पशुपति’लाई यसरी मागिन् रेखाले भोट
सिन्धुपाल्चोक । चर्चित नायिका रेखा थापा बिहीबार साँगाचोक, भीमटारस्थित पिछडिएका अल्संख्यक समुदाय माझी गाउँमा […]
‘प्रतिष्ठा’ बन्दै थवाङ, विप्लवले रोक्लान् कि पुन मत तान्न सफल होलान्?
काठमाडौं । रोल्पा सदरमुकाम लिबाङबाट कोटवाडा, कोर्चवाङ, घर्तीगाउँ, मिरुल हुँदै सहिदमार्गको बाटो बिहानै सानो […]
कम्युनिस्टको डिएनए नै अधिनायकवाद हो : डा लोहनी
जनकपुरधाम । एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)का अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संवैधानिक […]